Material hafa Ball
Fara herintsika mitondra fifantenana service
Rolling bearings avy amin'ny maro samihafa karazana, endriny sy lafiny. Hanao ny mari ny Rolling mitondra fandaharana dia ilaina ny ny mifidy ny mety mitondra karazana sy mety tsara mba hamantarana mitondra habe. Na izany aza, ny fandaharana dia tsy mitondra fotsiny javatra dia avy amin'ny Rolling bearings fa ahitana ny singa mifandray amin'ny bearings toy ny lavaka ary ny trano fonenana. Ny lubricant ihany koa ny tena manan-danja ao amin 'ny mitondra fandaharana satria tsy maintsy hisorohana anaovan'ireo sy hiaro hamely harafesiny ka ny mifandray miisa afaka ny fampisehoana feno. Afa-tsy ireo, ny fitomboka ihany koa ny singa tena manan-danja, ny fanatanterahana izay ny zava-dehibe manan-danja ho amin'ny fahadiovana ny lubricant. Ankoatra izany, maro lafiny hafa tsy maintsy heverina, toy ny mety mifanentana sy nitondra anatiny fangatahany fahazoan-dalana na preload, mitazona sy ny fametrahana fitaovana sy ny fanesorana fomba, etc.
To soa aman-tsara mamorona sanda ho an'ny mpanjifa mitaky fahatakarana lalina ny zavatra manokana mpanjifa mitaky ary mila momba ny vokatra sy ny tolotra. Mpanamboatra be mpanjifa izay andianà vokatra toy ny fiara, tokantrano fitaovana, paompy sy ny herinaratra Motors no tena voafaritra tsara sy sarotiny fepetra takiana mikasika ny teknolojia, kalitao, fitaovana sy ny vidiny. dia manolotra anareo fitsipika sy namboarina vahaolana izay hanampy anao hanatsara ny fampisehoana ary, niara, mampihena ny vola lany ankapobeny.
Ny fahafahantsika miasa akaiky amin'ny mpanjifa - pahombiazana lasa famolavolana mpiara-miasa - no fototry ny Viproce ny fahombiazana. Ny injeniera hahatakatra fa isaky ny fampiharana tsy manam-paharoa. Manana ela ny fanomezana sy ny vola-baovao vahaolana mahomby, izay manome ny teti-dratsy ny fifaninanana sisiny.
Viporce tapaka notendren'Andriamanitra ho bearings manokana lavitra any an-dafin'ny tafiditra ny vokatra fenitra tsipika. Na kely na lehibe kokoa, amin'ny toetra manokana, na vita tamin'ny fitaovana manokana, dia manana ny zava-nitranga hanao ny mari ny optimum vahaolana.
Ny sasany amin'ireo tafahoatra vahaolana efa natao ho an'ny ahitana 1mm ny 8 "lavaka diameters, fahaiza-manaony ny 25.000 lbs. [11.340 kg], ny mari-pana avy -320 ° F ny 600 ° F [-195 ° amin'ny 315 ° C], simika hatsiaka sy ny UV fanoherana. More matetika, ny injeniera optimum mamaritra ny fampisehoana, na ara-nofo utilisation mba handraisana fepetra manokana izay takian'ny ny fampiharana na ny fizotran'ny fivoriana.
Hamaivanina ny Import sy Export Cost
Taratasy fanamarinana ny niaviany registratio N
General Certificate ny niaviany, fisoratana anarana sy ny famoahana (C / O), GSP, fanamarinana ny niaviany, fisoratana anarana sy ny famoahana (Handefa, Forme)
Fandikan-teny, namany Sary valin, raharaham-barotra fifampiraharahana
Famandrihana, towing kabinetra, ny fanaovana antontan-taratasy fanambarana ny fanao, fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao fanambarana antontan-taratasy fangatahany fahazoan-dalana
Online firaketana an-tsoratra, tahirin-kevitra, fanamarinana
Kevitra famerenana, vaovao fidirana, hetra refund fanambarana